05.January.2006 somalitalk. Bosaso.somalia
Magaalada Boosaaso waxaa ku geeriyoodey marxuum Siciid Maxamed Maxamuud (Siciid Caduur), waxaana marxuumka lagu aasay magaalada Boosaaso. Warbixin ku saabsan tariikh nololeedkii marxuumka hoos ka akhri...
Taariikh Nololeedkii Marxuum Siciid Caduur::
Allaha u naxariistee marxuum Siciid Maxamed Maxamuud oo lagu naanaysi jiray (Siciid Caduur) oo saaka aroortii ku geeriyooday
Isbitaallka Puntland ee magaalada Boosaaso horayna xilal uga soo qabtay dowlad goboleedka Puntland ayaa waxaa isla maanta lagu aasay qabuuraha Biyo Kulule ee dhinaca Bari ee magaalada Boosaaso.
Aaska marxuumka waxa ka qayb galay sii hayaha xilka madaxweynaha ahna wasiirka arrimaha diinta iyo Awqaafta ee maamul goboleedka Puntland Barkhad Cali Saalax, wasiirka Dowlahadaha Hoose iyo horumarinta reer Miyiga Cali Cabdi Awaare, wasiir ku xigeenka Hawlaha Guud Maxamuud Bile Dubbe iyo madax kale oo aad u farabadan.
Sidoo kale aaska marxuum Siciid Caduur waxaa ka soo qayb galay issimo, dadweyne aad u farabada oo isugu jiray ehelladiisa iyo dad kale oo marxuumka si wayn aqoon ugu leh.
Marxuub Siciid Maxamed Maxamuud (Siciid Caduur) wuxuu ku dhashay magaalada tan Boosaaso sanadkii 1937-kii, hooyadii waxaa la oran jiray Saynab Maxamed.
1953-dii waxaa loo qaatay ciidamadii daraawiishta ee la oran jiray Wiilwaa oo saldhiggoodu ku yaallay magaalada Beledweyne
1991-dii -1992-dii markii ay burburtay dowladdii dhexe wuxuuka mid noqday guddiyadii ururka SSDF-ta ee gobolka Mudug.
1993-dii wuxuu kamid noqday ergadii ka qayb qaadatay shirkii dib u heshiisiinta Mudug ee lagu qabtay magaalada Muqdisho.
1996-dii golihii dhexe ee SSDF isagoo gudoomiye ka ahaa golihii hanti dhowrka ee SSDF.
Isla sanadkaasi 2003-da waxaa loo dhiibay xilka wasaaradda caafimaadka.
Wax xil ah ma uusan qaban marxuumka ka dib markii madaxweynaha Puntland loo doortay Jeneraal Maxamuud Muuse Xirsi.
Iidle macalin omar
Axmad ibrahim <xiirane84@hotmail.com>
Tacsida ehelka marxuumka waxaa loogu hagaajin karaa email: xiirane84@hotmail.com
Heshiisku waxa uu dhigayaa in la soo afjaro khilaafkii u dhexeeyey... Guji... Jan 5